वोमी र ग्रामीण स्वयंसेवक लघुवित्तको एकैदिन साधारणसभा, मर्जर र बम्पर लाभांश पारित गर्ने
काठमाण्डौ । मर्जर प्रक्रिया टुंग्याउन वोमी लघुवित्त र ग्रामीण स्वयंसेवक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले एकै दिन वार्षिक साधारणसभा डाकेका छन्। दुवै संस्थाको हिजो सोमबार छुट्टछुट्टै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यही पुस २८ गते वार्षिक साधारणसभा डोकेका हुन्। वोमी लघुवित्तले आफ्नो नवौँ वार्षिक साधारणसभा काभ्रेको साँगास्थित लहरी...
साना किसानको साधारणसभा तय, कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले २६.३१% लाभांश पाउने ?
काठमाण्डौ । लाभांश पारित मुख्य अजेन्डासहित साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो १९ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। संस्थाको हिजो सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही पुस २८ गते डोकेको हो। सभा काठमाण्डौको तीनकुनेस्थित कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा भर्चुअल माध्यमबाट बिहान ११ बजेबाट...
मेरो माइक्रोफाइनान्सको वार्षिक साधारणसभा पुस २८ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो आठौँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। संस्थाको हिजो सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही पुस २८ गते मंगलबार नुवाकोटको बट्टारस्थित होटेल वाटर टावरमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभामा गत आर्थिक वर्षका लागि...
एनएमबि लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा पुस २७ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । लाभांश पारित मुख्य अजेन्डासहित एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो आठौँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ। संस्थाको हिजो आइतबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही पुस २७ गते सोमबार डाकेको हो। सभा पोखराको पार्दी विरौटास्थित होटेल पोखरा ग्रान्डमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभामा...
समृद्धि फाइनान्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, हकप्रद निष्कासन मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । हकप्रद जारी विशेष प्रस्तावसहित समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो १९ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो आइतबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही पुस २७ गते मंगलबार आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा मकवानपुरको हेटौँडास्थित होटेल सामनामा बिहान ११ बजेबाट भर्चुअल माध्यमबाट सुरु हुन�...
गुडविल फाइनान्सले पुस २९ मा डाक्यो वार्षिक साधारणसभा
काठमाण्डौ । गुडविल फाइनान्स लिमिटेड (वित्तीय संस्था) ले आफ्नो २६ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। संस्थाको आज बिहान सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा भर्चुअल माध्यमबाट यही पुस २९ गते बुधबार काठमाण्डौको रविभवनस्थित होटेल क्राउन इम्पेरियलमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभाले संस्था गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव...
आशा लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा पुस २५ मा, १५% बोनस पारित गर्ने
काठमाण्डौ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो चौथो वार्षिक साधारणसभाको मिति टुंगो लगाएको छ। संस्थाको गत पुस ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही पुस २५ गते शनिबार नुवाकोटको ककनीस्थित फल एन्ड ट्राउट भिलेज होटेल एन्ड रेस्टुरेन्टमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको...
आईपीओ निष्कासनको मुख्य अजेन्डासहित महिला लघुवित्तले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा
काठमाण्डौ । आईपीओ निष्कासनको मुख्य अजेन्डासहित महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको हिजो बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको हो। सभा यही पुस २४ गते शुक्रबार काभ्रे साँगास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले हाल...
आरएसडीसी लघुवित्तले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् मुख्य अजेन्डाहरु
काठमाण्डौ । लाभांश पारित र अन्य लघुवित्त संस्थासँग मर्जर प्रक्रियाको थालनीको मुख्य अजेन्डासहित आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो सातौँ वार्षिक साधारणसभाको मिति टुंगो लगाएको छ। संस्थाको आज आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो पुस २४ गते रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको...
साना किसान विकास लघुवित्तद्वारा आकर्षक लाभांश प्रस्ताव, बोनस सेयर २५%
काठमाण्डौ । कोरोना कहरबीच पनि साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आकर्षक लाभांश घोषणा गरेको छ। संस्थाको आज मंगलबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई कुल २६.३१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब २ लाख...
घरेलु लघुवित्तले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, समतासँगको मर्जरलाई स्वीकृति गर्ने
काठमाण्डौ । समता लघुवित्तसँग मर्जरमा जान लागेको घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो दोस्रो वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको हिजो सोमबार बसेको बैठकले सभा आउँदो पुस १४ गते काभ्रेको बनेपास्थित पन्चकन्या बैंक्वेटमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभामा विशेष प्रस्तावका राखिने समता लघुवित्तसँगको मर्जर...